Ukubuka konke komhlangano we-PCB - Pandawill Technology Co., Ltd
I-PCB Assembly Uhlolojikelele
Ngamandla womhlangano womgodi (i-THT) nobuso be-Mount (SMT), womabili aholayo ne-RoHS atholakalayo, ibanga lethu lesevisi ye-PCBA lisuka kumfanekiso othile liya ekwakhiweni kwemihlangano eyinkimbinkimbi, yobuchwepheshe obuningi be-PCB kumavolumu aphansi kuye kwaphakathi.
Sinikezela ngezinsizakalo zokhiye eziphelele futhi ezingaphelele. I-Turn-Key Full ihlanganisa ukwenziwa kwe-PCB nomhlangano, kufaka phakathi ukwenziwa kwama-PCB, izingxenye zokuthola umhlangano wokugcina we-anf. Nge-Turn-Key Engaphelele, ikhasimende lingakunika uhlu oluyingxenye yezingxenye. Sizohola izingxenye ezisele bese senza umhlangano ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Ngokuvamile, sinikeza insizakalo ye-PCB Assembly:
✓I-SMT (i-Surface-Mount Technology), i-THT (i-DIP Technology) ne-SMT ne-THT kuhlanganisiwe.
✓Ukukhiqizwa kweRoHS ne-Non RoHS.
✓I-prototype, ukukhiqizwa kwevolumu ephansi kuya kokuphakathi (1-5000 PCS).
✓Izixazululo zeThenkey / Consignment Supply Chain Solutions.
✓Usayizi wengxenye encane kunazo zonke ongu-0201, i-BGA, iBGA, i-QFN, i-POP nama-chip angenawo umholi.
✓Izixazululo zokuhlola: i-X-ray, i-AOI, i-ICT, ukuhlolwa kombono nokuhlolwa komsebenzi.
Isisekelo samakhasimende ethu sifaka abaholi bemboni kuRF, Medical, Industrial, Smart Home, Inthanethi Yezinto kanye nogesi wezimoto. Sizinikezele ekuhlinzekeni ikhwalithi ephezulu, ukulethwa nesevisi yamakhasimende ngentengo yokuncintisana.